नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडीमैत्री वातावरण नै छैन: निराकार श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता) - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
निराकार श्रेष्ठ संयोजक, नाडा अटो शो
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन् अफ नेपालले हरेक वर्ष दशैँ तिहारको अवरस पारेर ‘अटो शो’को आयोजना गर्दै आएको छ। यो वर्ष पनि भदौ २६ गतेबाट सुरु भएको अटो शो आजदेखि समाप्त हुँदैछ। नाडामा विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष आकर्षक चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीको प्रदर्शन बन्यो। ५ वटा कम्पनीका इलेक्ट्रिक गाडीहरु यस वर्षको नाडा अटो शोमा प्रर्दशनमा रहे। तर ठूला गाडीलाई भने यो वर्ष प्रर्दशनमा राखिएको थिएन। विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष नाडा अटो शो व्यवस्थापकीय रुपले पनि राम्रो रहेको आयोजकले दावी गरेको छ। चालू नाडा अटो शोको बारेमा यसका संयोजक तथा हुण्डाइको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठसँग नेपालखरबरले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ।
यो वर्ष नाडा अटो शोमा अवलोकनकर्ताको आगमन कस्तो पाउनुभयो?
यस पटक गत वर्षको तुलनामा अवलोकनकर्ताहरु आगमन बढी रहेको छ। हामीले ६० हजारले अवलोकन गर्छन् भन्ने सोच राखेका थियौ। गत वर्ष पनि ६० हजारले अवलोकन गरेका थिए। तर, त्योभन्दा निकै बढ्ने देखिएको छ। यो वर्ष ७०–८० हजारको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। आज अन्मित दिन भएको हुँदा अवलोकनकर्ताहरु अझै बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ।
मेलामा कति कम्पनीका स्टलहरु समावेश छन्?
मेलामा ७१ वटा कम्पनीका १३४ वटा स्टलहरू रहेका छन्। सोमा १९ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे सवारी र २० वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे सवारी साधनहरू राखिएको छ। नयाँ प्राविधिक विकास, सवारी सुरक्षा प्रविधि, स्पेयर पार्टस, लुब्रिकेन्टस, टायर, ग्यारेज उपकरण, ब्याट्री तथा अन्य एससिरिजहरूको पनि सहभागिता रह्यो।
तपाईंले अवलोकनकर्ता बढेको भन्नु भयो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षे फरक चाहिँ के छ?
नेपालमा हुने सबै प्रर्दशनीमध्ये यो सबैभन्दा ठूलो हो। हरेक नाडा सोमा फरक हुने भनेको पहिलेभन्दा फरक मोडलका सवारी साधानको प्रदर्शनी नै हो। यो वर्ष महिन्द्रसमेत गरेर ५ वटा कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक्स कार प्रर्दशनीमा राखेका छन्। व्यवस्थापनको हिसावले पनि धेरै राम्रो बनाएका छौं। स्टलहरुको सरसफाइदेखि अन्य कुराहरुको पनि हामीले हेरविचार गरेका छौं। विगतका वर्षमा आएका गुनासाको सुनुवाई गर्दै साउन्ड सिस्टममा नियन्त्रण, स्टलमा आकर्षण पार्किङ व्यवस्थालाई राम्रो बनाएका छौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रदर्शनीमा हामीले निर्माण इक्यूमेन्ट तथा ठूला सवारी साधानलाई पर्द्रशनीमा राखेको छैनौं। जसको कारणले ठूला सवारी राख्ने ठाउँमा स्टल थप भएका छन्।
ठूला सवारी साधन अटो मेलामा हटाउन कसरी सहमति जुट्यो?
यसमा दुई÷तीनवटा कुराहरु जोडिएका छन्। विगतका वर्षको अटो शो मूल्याङ्कन गर्ने हो भने ठूला गाडीहरुमा अवलोकनकर्ताको रुचि नै देखिएन। स्टलहरु त समावेश भए तर त्यहाँ अवलोकनकर्ताको उपस्थित नै रहेन। त्यसकारणले यो वर्ष ठूला सवारी साधन नराख्ने निर्णय त गरियो तर उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को मुख्य विषय उठ्यो। त्यसमा पनि नाडाका पदाधिकारी सबैको सल्लाहमा सहमति जुट्यो। हामीले ठूला गाडीका बिक्रेताहरुसँग भनेका छौं– नाडा अटो शो बाहेक अन्य किसिमका प्रदर्शनी तथा मेलामा ठूला सवारीलाई राखिने व्यवस्था नाडाले नै गर्ने छ। जस्तै घरजग्गा मेला, निर्माण व्यवसायीहरुले गर्ने विविध मेलामा ठूला गाडीहरुले प्रदर्शन गर्ने सहमति भएको छ। त्यसमा उनीहरु पनि सकरात्मक छन्।
यस मेलाको प्रमुख आकर्षण नै इलेक्ट्रिक गाडी रहेको भन्नु भो। कुनकुन कम्पनीका कस्ता गाडीहरु प्रर्दशनमा छन्?
हाम्रो हुण्डाई कम्पनीले पहिलोपटक विद्युतीय सवारी प्रदर्शनीमा ल्याएको छ। त्यस्तै टाटाले पनि पहिलो पटक विद्युतीय सवारी प्रदर्शनीमा राखेको छ तर बिक्रि चाहि सुरु गरेको छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ। महिन्द्रा र कियाले यसअघि नै नेपालमा विद्युतीय कार बिक्री वितरण शुरु गरेको छन्। त्यस्तै रेनोल्टले पनि जोए कार प्रर्दशनीमा राखेको छ। सबैले साना गाडीहरु नेपालमा भित्राएको देखिन्छ। नेपालको भूगोल सुहाउँदा गाडीभन्दा पनि बजारमा निस्केका इलेक्ट्रिक कारहरु प्रर्दशनमा छन्।
विश्वमा धेरै कम्पनीले विद्युतीय गाडीहरु उत्पादन गर्न सुरु गरेको छन्, नेपालमा पनि त्यसको आगमन हुन थालिसकको छ, के अव इलेक्टोनिक्स् कारको माहोल बन्न थालेको हो?
पक्कै पनि अव विश्व नै इलेक्ट्रोनिक्स सवारी साधनप्रति अकर्षण हुन थालेको छ। त्यसको बजार दिन प्रतिदिन बिस्तार भइरहेको पनि छ। नेपालमा भने अहिले नै त्यसको माहोल बनेको भन्न सकिँदैन। मानिसहरु वातावरणमैत्री बन्नको लागि, वातावरण प्रदुषणमुक्त बनाउने अभियानमा सहयोग गर्नका लागि विद्युतीय मोटर किनिरहेको छन्। तर, नेपालको हकमा सरकारले विद्युतीय सवारी किन्नका लागि दिएको सहुलियतबाट लाभ लिन यस्तो गाडी किनिरहेका हुन् कि भन्ने प्रश्नको उठ्न थालेको छ। नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडीमैत्री वातावरण नै निर्माण भएको छ्रैन। सरकारले अहिले इलेक्ट्रिक गाडीप्रति कुनै नीति नै लिएको देखिँदैन।
सरकारले इलेक्ट्रोनिक्स गाडीको लागि कानुनी अवधारण बनाउन पर्ने हो कि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिनु पर्ने हो?
दुबै साथ साथै गर्नुपर्छ। सरकारले इलेक्ट्रिक गाडी भित्राउँदा भन्सार छुट दिएको छ। ल्याए पनि चलाउने कसरी हो भन्ने अन्योल छ। चार्जिङ स्टेसन नै छैन। डिजेट पेट्रोल हाल्नका लागि गल्लीगल्लीमा पम्प छ तर चार्ज कहाँ गर्ने त्यसको अभाव छ। सरकारले स्टेसनको व्यवस्था गर्नु प¥यो। मैले जोड्न खोजेको अर्को कुरा भनेको सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीका लागि एउटै मपदण्ड बनाउनु पर्छ। चार्जिङ स्टेसन त बनाउने तर एउटा कम्पनीले थ्री पिनका गाडीहरु भित्राउला, अर्को ले टु पिनका गाडीहरु भित्राउला, त्यसमा एकरुपता भयो भने मात्र निर्माण गरिएको स्टेसनले पनि काम गर्न सक्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगायो। सबैले विद्युतको उपयोग सकेसम्म गरे। सरकारले नै चीनबाट इन्टक्सन चुल्हो ल्याएर बिक्री वितरणसमेत गर्यो। तर, हरेक स्थानमा बिजुलीका लाइन ‘सट’ हुन थाल्यो। भोल्टेजको समस्या देखाप¥यो। गाडीहरु चार्ज गर्दा पनि त्यो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। भन्सार छुटले मात्रै पुग्दैन। सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्।
इलेक्ट्रिक गाडीको मूल्य र सञ्चालनमा अन्य गाडीका तुलनामा के कतिसस्तो वा महँगो हुन्छ?
अन्य गाडीलाई दुई सयदेखि तीन सयसम्म कर लगाइएको छ तर सरकारले विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र लगाएकोले केही सस्तो देखिन्छ। गाडीको सामान्यतया आयु १५ देखि २० वर्ष हो। विद्युतीय सवारीको मुख्य चुनौति भनेको ६÷७ वर्षको दौरानमा ब्याट्री फेर्नुपर्छ। ब्याट्री निकै महँगो छ। पेट्रोल डिजेलमा चल्ने सवारीको इन्जिनभन्दा विद्युतीय सवारीको ब्याट्री महँगो छ अहिलेको बजारमा। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्यो, ब्याट्रीको उत्पादन र प्रयोग बढ्यो, प्रविधिमा पनि परिवर्तन आयो भने भविष्यमा ब्याट्रीको मूल्य सस्तो पनि पर्न सक्छ।
गाडी किनिसकेपछि हुने इन्धन खर्च, पाटपूर्जा फेर्न, मर्मत गर्न आउने खर्च भने विद्युतीय सवारीमा सस्तो पर्छ। वर्षमा १० हजार किलोमिटर गाडी गुडाउनेले ५ वर्षमा ५० हजार किलोमिटर गाडी गुडाउँछ। अहिलेको मूल्यका आधारमा पाँच वर्षमा तेलको खर्च करिब ६ लाख रुपैयाँ आउँछ। विद्युतीय कारमा १ लाख ५० हजार खर्च आउँछ। विद्युतीय कारमा मेकानिकल पार्टस् थोरै हुन्छन्। त्यसैले मेकानिकल पार्टस् फेल हुने चान्स पनि कम हुन्छ। मर्मत र स्पेयर्स पाट्समा पनि खर्च कम हुन्छ।
नाडा अटो शो ब्रण्डिङ गर्ने स्थान हो कि बिक्री गर्ने?
नाडा अटो शोले सबै कम्पनीहरु एकै स्थानमा ल्याउने काम गर्छ। ग्राहकलाई यो नै कम्पनीको गाडी खरिद गर्छु भन्ने कमैलाई मात्रै हुन्छ। अर्को कुरा कुन कम्पनीको सोरुम कहाँ छ भन्ने पनि झन्झट हुनसक्छ। यो सोमा आएर उनीहरुले हेर्न सक्छन्।
अर्को कुरा नेपालमा धेरैजसोले एकैपटक गाडीको पैसा तिरेर किन्ने चलन छैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत बैंकबाट कर्जा लिएर किस्ताबन्दीमा गाडी खरिद गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले यो सोमा विभिन्न अफर हुन्छन्। त्यसकारणले पनि बिक्री तथा बुकिङ बढी भएको हो। ब्रान्डिङ त छँदै छ नि। यो सोलाई नै केन्द्रित गरेर विभिन्न कम्पनीले नयाँ मोडलहरु थपिरहेका हुन्छन्। त्यो आकर्षणले पनि अवलोकनकर्ताहरु थपिइरहेका हुन्छन्। यो वर्ष मात्रै ३ वटा नयाँ ब्राण्डका गाडी थपिएका छन्। मोटरसाइकलका ४ वटा नयाँ ब्राण्ड थपिएका छन्। यस्ता सोले पर्याप्त छनौटको अवसर दिन्छ। त्यही भएर यहाँ करोबार बढी हुन्छ।
प्रकाशित ३१ भदौ २०७५, आइतबार | 2018-09-16 16:35:55